राजनीति Archives - Cyber News
क्षेत्र रहेको तनहुँ अहिले २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको छ । ०४८ सालमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट विजयी भएका पौडेल ०५१ को निर्वाचनदेखि तनहुँ २ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्दै विजयी बन्दै आएका छन् । विगतमा आफैंले छाडेको क्षेत्र नं १ का अधिकांश भूभाग समेटिएको क्षेत्र नं २ को भूगोलमा पौडेल २४ बर्षपछि फर्कन लागेका हुन् । पौडेलले छाडेपछि उनको विरासत कांग्रेसकै नेता गोविन्दराज जोशीले सम्हाल्दै आएका थिए । जोशीले तनहुँ १ बाट ०५१ र ०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा जिते पनि ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी तेस्रो भए । अकुत सम्पती आर्जन गरी भष्ट्राचार गरेको अभियोग जोशीमाथि लागेपछि उनको राजनीतिक जीवन र यात्रा स्खलित बन्दै गयो । जोशीलाई एकातिर भष्ट्राचारको अभियोग लाग्यो, अर्कोतिर उनी निर्वाचनमा पराजित भए । यही मौकामा पौडेल तनहुँको राजनीतिमा हावी भए । जिल्लाको राजनीतिमा पौडेल हाव
Oct182017 by प्रदिपNo Comments
समानुपातिक सूची सच्याउन माग गर्दै राजपा मुख्यालयमा धर्ना
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूची सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का दुई महासचिवसहितका नेताहरुले राजधानीको बवरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । नेताहरुको मर्यादाक्रमअनुसार समानुपातिक सूची सच्याउन माग गर्दै महासचिव केशव झा, पेशल ढकाललगायत नेताहरु धर्नामा बसेका हुन् । साधारण सदस्य समेत नरहेकालाई समानुपातिकको सूचीमा राखेको, आन्दोलनमा सक्रिय महिलाहरुलाई बेवास्था गरेको, युवा तथा विद्यार्थी नेताको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नभएको दावी गर्दै उनीहरुले प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि तत्काल केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसअघि लाभको पदमा बसिसकेकालाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै राजपा नेताहरुले आफुहरुको माग सम्बोधन नभएपछि तिहार लगत्तै रिले अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । महासचिव झाले पार्टी नेतृत्वले मनोमानी ढंगले
भ्रष्ट नेता चुन्ने कि प्रष्ट नेता चुन्ने ? – जनताको प्रश्न – कान्तिपुर आज
जिकिँदो चुनावलाई हेरेर दलहरुको गठबन्धन फेरिएको छ, तर सोच उस्तै छ,आचरण झन् झन् खराव हुँदै गइरहेको छ, सत्ताका लागि पार्टीहरुको ध्रुवीकरण भएको छ तर, देश र जनताको हितका लागि दलहरु खण्डीकरण भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले देशलाई ढपक्कै ढाकेको छ । लोकतन्त्रलाई जोकतन्त्र बनाएर इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल बनेको हामीले टुलुटुलु हेरिरहेका छौं । भ्रष्टाचारीहरुले टिकट बाँड्ने, डनहरु उम्मेदवार सिफारिस हुने तर सत्यको आग्रह गरेका डा. गोविन्द केसी १३औं पटकसँा पनि पराजित भएको देख्दा राजनीतिको पुरानै ढाँचाले हाम्रो लोकतन्त्र झन् झन् अपांग बन्दै गएको हामीले निरिह भएर हेरिरहेका छौं । किनकि हामीलाई यसको बिकल्प थिएन । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरुलाई पटक पटक जितायौं, हामीसँग कुनै सम्भावना थिएन त्यसैले सुध्रेलान् भनेरै दूराचारीहरुलाई पटक पटक माथि उठायौं । तर, देशले फड्को मारेन । बैकल्पिक राजनीतिमार्फत स्व